Nagu saabsan - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Laga soo bilaabo 2007, Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd. waxay diiradda saarayeen adeegga macaamiisha qandaraaska macaamiisha adduunka. Our one stop turnkey xal waxaa ka mid ah qaybaha alaab, been abuur PCB, shirkii PCB, caag / sanduuqa dhismaha sanduuqa, sub-shirkii si ay u dhamaystiraan waxyaabaha shirka. Tayada waa la damaanad qaaday.
EMS ka sokow, Fumax R&D waxay ka caawin kartaa macaamiisha inay qaabeeyaan mashaariic cusub oo kala duwan oo ay fikradahooda ugu beddelaan alaabooyin dhab ah. Adeegyadayada R & D oo ay ku jiraan naqshadeynta wax soo saarka cusub, naqshadeynta elektiroonigga ah, Qaabeynta PCB, naqshadeynta makaanikada, noocyada iyo tijaabada tijaabada wax soo saarka ballaaran. Waxaan shaqaalaysiinaa in kabadan 300 shaqaale aqoon sare leh oo leh cabbirka warshada oo dhererkeedu yahay 5,000 mitir squre.
Kooxda Fumax waxaa ka go'an inay u gudbiyaan macaamiishayada xalka ugu fiican ee soo saarista tijaabada tijaabada ah ilaa wax soo saarka dufcadaha dhexdhexaadka ah.
Himilada Fumax waa inay bixiso xalka xulashada OEM-yada kuwaas oo ubaahan naqshad diirad iyo jawaab celin leh iyo lamaane wax soo saar leh oo leh alaab elektaroonik ah oo dhexdhexaad ah.
Waxaan ku guuleysanay oo si joogto ah u cusbooneysiineynaa dhammaan shahaadooyinka ay ka mid yihiin ISO90001, CE, FCC, UL, ROHS, si aan u damaanad qaadno alaabada tayada sare leh.
Macaamiisha Koowaad - Si loo siiyo naqshad u heellan oo cusub iyo adeegyo wax soo saar si daacadnimo leh macaamiisheenna; iyaga oo siinaya faa'iido tartan ah oo dabacsanaan ah, tikniyoolajiyad, waqti suuq ah, iyo wadarta kharashka.
In loo aqoonsado lamaane la isku halleyn karo oo soo saaraya oo soo saaraya alaab heer caalami ah oo loogu talagalay macaamiisheenna, iyadoo abaalmarinaysa shaqaalaheenna iyo saamileyda.
Macaamiil ku qanacsan, Dabacsanaanta, Daacadnimada, Mas'uuliyadda, Bixiyaha Xalka, Shaqada Kooxda.